သင့်ရဲ့Facebook Account Security နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေကြည့်ပါ | Online Service Center Myanmar -->
သင့်ရဲ့Facebook Account Security နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေကြည့်ပါ
Facebook Account Security နဲ့ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါ မေးခွန်းလေးတွေကို ဖတ်ရှုပြီး ဖြေဆိုကြည့်ပေးပါ။ သင့်အဖြေဟာ သင့်အကောင့် Security ပိုင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ Safe ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သိရပါလိမ့်မယ်။
1. သင့်ရဲ့ Facebook Account ကို Security အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားလား...?
2. သင့်ရဲ့ Facebook Account Password ကို အခြားသူတစ်ယောက်ယောက် ( ချစ်သူ၊ ကြင်သူ၊ ခင်မင်သူ၊ ) ကို ပေးမသုံးတတ်သူတစ်ယောက်လား...?
3. သင်ဟာ တွေသမျှ Mobile App, Website App, တွေကို အသုံးမပြုပဲ Official Website ဖြစ်တဲ့ Google Play Store , iTunes Apple Store, ကနေပဲ တိုက်ရိုက်သွားရောက် Download ပြုလုပ်သုံးစွဲခဲ့တဲ့သူလား...?
4. သင်ဟာ SE လာထိုးတာမျိုးတွေကို သတိထားပြီး ရှောင်ရှားတတ်သူမျိုးလား...?
5. သင်ဟာ မကြာခနဆိုသလို သင့် Facebook Account Security ပိုင်းတွေကို Check လုပ်တတ်သူတစ်ယောက်လား...?
6. သင်ဟာ Password ကို အလွယ်၊ ပြီးစလွယ်( Name, Birth Date, Phone Number,တွေနဲ့ )ပဲ ပြုလုပ်တတ်သူမဟုတ်ပဲ မှန်းရခက်တဲ့ ပေးနည်းမျိုး ( ဥပမာ MgMg123!@#$%^&* လိုမျိုး ) တွေနဲ့Password ကို အလွယ်တကူ မှန်းလို ့မရအောင် ပေးတတ်သူမျိုးလား...?
အပေါ်က မေးခွန်း (6) ခုလုံးကို ဖတ်ရှုပြီးသင်ဖြေလိုက်တဲ့အဖြေဟာ Yes ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Account Security ပိုင်းဟာ 99.99% Safe ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
အကယ်၍ မေးခွန်း (6) ခုလုံးကို ဖတ်ရှုပြီး သင်ဖြေလိုက်တဲ့အဖြေဟာ No ချည်းပဲ ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင့် Account Security ဟာ 0% ဖြစ်နေပြီဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ သင့်အကောင့်ဟာ Hack ( ခိုးယူ ) ခံရဖို့အင်မတန်မှ လွယ်ကူနေတယ်။ ခိုးယူခံရနိုင်ခြေဟာ အရမ်းများနေတယ်ဆိုတာကို သိရှိထားဖို ့လိုပါမယ်။
သင့် Facebook Account ဟာ Hack လုပ်ခံရနိုင်ခြေများနေပြီဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ကာကွယ်ဖို ့လုပ်သင့်တာလေးတွေ လုပ်ဖို့လိုလာပါပြီ။ သင့်အနေနဲ့ကိုယ့်အကောင့်လေးကို ခိုးယူမခံရစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနေရာ => http://bit.ly/2o31qz9 လေးမှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုပြီး ဖြစ်ဖြစ် OSC-Myanmar Page နဲ့ Website မှာ တင်ထားတဲ့ Post တွေ Video လေးတွေကို လိုက်လံ ဖတ်ရှု လေ့လာပြီး သင့်ရဲ့ Facebook Account Security ပိုင်းကို 100% Safe ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေ။
🌐 Viber Public Chat - www.viber.com/OSC-Myanmar__________________________________________________